မှိုကွန်ယက်များမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် iOS Devices ကို သုံး၍ ပထမဆုံးသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုကိုပြုလုပ်သည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » မှိုကွန်ရက် '' Streamer အင်အားကြီးနိုင်ငံများက iOS ကိရိယာများကို အသုံးပြု. တစ်ခုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ-ပထမဦးစွာတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်!
မှိုကွန်ရက် '' Streamer အင်အားကြီးနိုင်ငံများက iOS ကိရိယာများကို အသုံးပြု. တစ်ခုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ-ပထမဦးစွာတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်!
ထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းများ၏ခေါင်းဆောင်အနေဖြင့်နှင့်ရက်စွဲစာနယ်ဇင်းထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်များမှတက်, အသံလွှင့် Beat နောက်ဆုံးပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက်ဆောင်တတ်၏! come1 မှပို
BeTerrific.com အတွက် 8000 Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲကနေတိုက်ရိုက်လွှ webcasts စီးဆင်းရန်, တစ်ခုတည်း IP ကိုပိုက်သို့မျိုးစုံကြိုးမဲ့ဒေတာကတ်များ bonds သော Streamer 2014 သုံး Los Angeles မြို့ နီးပါး 300,000 ကြည့်ရှုရန်။
* San Diego,, CA - (ဇူလိုင်လ 2, 2014) - ပြီးခဲ့သည့်ရာစုတှငျ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး အစွန်းရောက်အသွင်ပြောင်းခံနှင့်ယနေ့အဘယ်သူမျှမကွဲပြားလျက်ရှိသည်။ အခုတော့သာ iOS ထုတ်ကုန်, မှိုကွန်ယက်, Inc ကနေနည်းပညာ¢ Broadband Bondingâမှတဆင့် app တစ်ခု, တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုခလုတ်နှင့်အင်တာနက် "အတူရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးအချိန်မရွေး, နေရာမရွေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်သည်။
မကြာသေးမီက Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲ, ဝန်ကြီးချုပ်ရုပ်ရှင်, ဗီဒီယို, နှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာကုန်စည်ပြပွဲ, Artsis မီဒီယာ Inc ကိုဖွင့်မှာ BeTerrific.com တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်း-firstâ€ "iFilmmaking နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် YouTube ပေါ်မှာနီးပါး 300,000 ကြည့်ရှုဖို့က streaming ပြည့်စုံခြင်းနှင့် UStream။ အဆိုပါ Padcaster Mini ကို Kit ကနေတစ်ဆင့်တစ်ဦးက iPad mini ကိုအပါအဝင် iPhone နှင့် iPad, နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောကင်မရာများအဖြစ်မိုက်ကယ် Artsis, Artsis မီဒီယာနှင့်ငါးအချိန်သူဟာ Emmy Award ဆု၏ CEO တစ်ဦးတဲအတွင်းမှနှင့်မှဗီဒီယိုသတင်းစာဆရာအနိုင်ရခဲ့သည်နဲ့သူ့အဖွဲ့ကိုပစ်ခတ်သောဗီဒီယို ကြမ်းပြင်ပြသပါ။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် 1920 ×တစ် beta ကိုသစ်ကို FiLMiC Pro ကိုက iOS app ရဲ့ဗားရှင်းပြီးတော့ကြိုးမဲ့ output ကိုအပြည့်အဝ 1080 ကိုအသုံးပြု HD တစ်ဦး Paladin ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Switcher ကိုရန်က iOS devices တွေကိုထံမှဗီဒီယိုမှိုကွန်ယက် Streamer 8000 ချိတ်ဆက်ထားပြီး။ အဲဒီမှာ မှစ. , Streamer 8000 အဆိုပါ webcasts များ၏အစာရှောင်ခြင်း, အရည်အသွေးမြင့် streaming များကယ်နှုတ်တော်မူ၏။
အဆိုပါ Streamer 8000 နှင့် Pro ကိုပု Streamer ပါဝင်သောမှိုကွန်ရက် '' Streamer မိသားစု, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်-grade ကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့် redundancy ပေး, တစ်ခုတည်း, optimized IP ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့မျိုးစုံ 3G / 4G ကြိုးမဲ့ဒေတာကတ်များစဘွန်းမှကုမ္ပဏီ၏မူပိုင် Broadband Bond နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။
Artsis အဘို့, Streamer 8000 တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်အဘို့လိုအပ်သောအောင်မြင်မှုများကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ အနှောင်အဖွဲ့ device ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်နှင့်အရည်အသွေးများအတွက်ကိုက်ညီမှုပေးအပ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး။ "ငါသည်စမ်းသပ်ပြီးင့်ကတခြားကွန်ရက်က devices များနှင့်အတူကျွန်မသူတို့အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ရှိမရှိစိုးရိမ်ပူပန်ချင်ပါတယ်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ပြဿနာတွေသို့ပြေးချင်ပါတယ်, ငါမည်သူမဆိုတစ်ဦးခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးဒုက္ခ-အခမဲ့အတွေ့အကြုံရှိသည်မှလူသိများဘယ်တော့မှင့် ဂြိုဟ်တု ထရပ်ကား။ မဟုတ် ... တသမတ်တည်းဖြစ်တယ်, အသုံးပြုရလွယ်ကူသော Streamer 8000 အတူဒါနှင့်စိတ်ငြိမ်သက် filmmakers ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်, ကရိုးရှင်းစွာအလုပ်ဖြစ်တယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
"မှိုကွန်ယက်, ဤတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကဗီဒီယို streaming များပါဝင်ခဲ့သမြှသောမိတ်ဖက်အတွက်အသွင်ပြောင်း၏ရှေ့တန်းမှမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး, အရည်အသွေးဗွီဒီယိုကိုဖန်တီးဘယ်နေရာကနေမဆို,, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လွှင့်နိုင်ပါရှိရာ "Artsis ဆက်ပြောသည်။ "အဓိကအချက်မရှိကန့်သတ်တော့ဘူးဖြစ်ကြပြီးဖန်တီးမှုများသူတို့အကောင်းဆုံးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုပြုနိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီး"
အဆိုပါ Streamer 8000 နှင့် Streamer Pro ကို select လုပ်ပါလိုင်းများမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး (858) 452-1032 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီး www.mushroomnetworks.com.
မှိုကွန်ယက်, Inc, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအကွာအဝေးမှမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်းငံ့ Broadband Bond ဖြေရှင်းချက်ပေး, San Diego မှ,, CA အခြေစိုက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့အထင်ကရကုန်ပစ္စည်းလိုင်းအလွယ်တကူလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးစကေးနိုငျသောတစ်ခုတည်းသောအလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော broadband ပိုက်ဖွဲ့စည်း SMBs, လုပ်ငန်းများ, Multi-အိမ်ငှားအဆောက်အဦးများ, နှင့်မြန်နှုန်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုထပ်တူထပ်မျှဘရော့ဘန်းလက်လှမ်းနည်းပညာများဆောင်ရွက်ပါသည်။ မှိုကွန်ယက်ကွန်ယက်ကမ္ဘာ့ဖလားရဲ့ "ထိပ်တန်းနည်းပညာလမ်းကြောင်းသစ်လောဘ 2012 San Diego မှစီးပွားရေးဂျာနယ်ကတီထွင်ဆန်းသစ်မှု Award ဆု XCHANGE Tech မှဆန်းသစ်သော Xcellence Award ဆု 2007 CONNECT® '' အများစုမှာဆန်းသစ်သောနယူးကုန်ပစ္စည်း '' ဆုချီးမြှင့်, 2008 CONNECT® '' အများစုမှာဆန်းသစ်သောနယူးကုန်ပစ္စည်း '' ဆုချီးမြှင့်, များအတွက်ဗိုလ်လုပွဲခဲ့သည် 2008 "ဆုချီးမြှင့်ခြင်း, ဆီလီကွန်ဗယ်လီ၏ဆက်သွယ်ရေးကောင်စီအားဖြင့်ပုံသေဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအတွင်းအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်း။ * နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.mushroomnetworks.com သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခ 858-452-1032.
ယခင်: ဂျာနယ်ထုတ်လွှင့် Group မှယင်း၏ Newsgathering စစ်ဆင်ရေးရဲ့တစ်ဖက်မှာအသုံးချ LiveU ရဲ့နယူး LU500
နောက်တစ်ခု: ကွေးဂျိုးပြည်နယ်တီဗီတရုတ်နိုင်ငံကွေးဂျိုးပြည်နယ်ထဲမှာ Power နယူး IPTV ဝန်ဆောင်မှုမှသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' Vibe VS7000 ရွေးကောက်